FENERIVE - EST : Fankalazana ny Andron'ny Ankizy Afrikanina - Arozaza
Ho an’ity taona 2021 ity, ny Faritra Analanjirofo dia voafidy hanamarihana ny fankalazana ny Andron’ny Ankizy Afrikanina mba hanamafisana bebe kokoa ny rafitra sy ny hetsika mifandraika amin’ny fiarovana ny zaza amin’ity Faritra ity.
Ny lohahevitra nosafidiana hanamarihana ity hetsika ity dia: « 30 taona aorian’ny nananganana ny Sata: andao hanafaingana ny fanatanterahana ny Agenda 2040, ho an’ny Afrika sahaza ho an’ny ankizy », mifanaraka amin’ny naoty nomen’ny Sekretera ny Komitin’ny Afrikanina Manam-pahaizana momba ny zon’ny zaza sy ny fiahiany.
Raha ny marina, taorian’ny fanarahana ny Sata afrikanina momba ny zon’olombelona sy ny fiahiana ny zaza tamin’ny taona 1999, dia manamarika i Madagasikara, toy ny isan-taona, ny fankalazana ny Andron’ny Ankizy Afrikana izay anaovana hetsika manokana amin’ny fanentanana ara-tsosialy hanomezana hery bebe kokoa amin’ireo hetsika mamela ny tanjona napetraka ao amin’ny Sata voalaza fa ho tratra.
Ny tanjona ankapobeny amin’ity hetsika ity dia ny fanetsehana ny manampahefana, ny mpitondra hevitra, ny fiarahamonina ary ny ray aman-dreny mba hirotsaka an-tsehatra amin’ny hetsika hiadiana amin’ny karazana herisetra sy fanararaotana ny ankizy eto Madagasikara, amin’ny ankapobeny., ary koa amin’ny faritra Analanjirofo manokana.
Hetsika maro no ho atao mandritra ny telo andro fankalazana, izany hoe
• Fandrindrana “audiences foraines » ho an’ny fisoratana anarana ny zaza teraka;
• Fanentanana ny mpianatra any an-tsekoly amin’ny ady atao amin’ny herisetra, fanararaotana ara-nofo ary fanambadian’ny ankizy;
• Valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety momba ny asa fiarovana ny zaza amin’ny sehatra nasionaly miaraka amin’ny filohan’ny departemanta, minisitra amin’ny ambaratonga nationaly;
• Valan-dresaka arahina adihevitra miaraka amin’ny fandraisan’anjaran’ny manampahefana, “leaders d’opinion”, ireo mpiaro ny ankizy sy ny solontenan’ny ankizy mba hanamafisana bebe kokoa ny rafitra fiaraha-miasa sy ny fandrindrana ny hetsika fiarovana any amin’ny faritry Analanjirofo.
Ity fankalazana ity dia apetraka eo ambanin’ny Fiahian’ ny Ramatoa Mialy RAJOELINA, vadin’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ary eo ambany Fanohanan’ny Ramatoa MICHELLE Bavy Angelica, Minisitry ny Mponina, ny Fiahiana ara-tSosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy.